विद्युतीय बस कहिले गुड्ला? - Everest Dainik - News from Nepal
विद्युतीय बस कहिले गुड्ला?
काठमाडौंः विद्युतीय बस खरिदको जिम्मा पाएको साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तत्काल बस खरिद नगर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया (बस खरिद) नै अन्योलमा परेको छ । सरकारले गत असोजमा साझा यातायातलाई स्पेसिफिकेसन मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । साझा यातायात र सरकारबीच तीनपटकसम्म बैठक बसेको छ । दुई महिना बितिसक्दा पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
यस विषयमा जानकारी लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्यो, तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यद्यपि, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने यस विषयमा बोले । उनले भने, ‘केही महिनाअघि मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको हो । त्यसपछिको प्रगति मलाई जानकारी भएन ।’ साझा सहकारीले भने सरकारले ‘स्पेसिफिकेसन’को प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र उपलब्ध गराएकाले त्यसमा हेरफेर गरेकोे दाबी गरेको छ ।
सरकारले स्वीकृति नदिँदा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको उसले जनाएको छ । साझा सहकारीका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले भने, ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट बस खरिदका लागि ‘प्रिइलिमेनरी स्पेसिफिकेसन’ आएको थियो । त्यसमा हामीले आवश्यक परिमार्जन गरेका हौँ । सरकारले स्विकृति नदिँदा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’
सरकारले एक वर्षअघि नै तीन सयवटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा सहकारीले सरकारबाट गत साउनमा तीन अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । साथै, प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयं साझाले समान साढे दुई करोड हालेर ४५ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सरकारसँग साझाले गर्भमेन्ट–टु–गर्भमेन्ट (जिटुजी) गरेर ५० वटासम्म बस ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले गत असोजमा साझा सहकारीलाई पत्र काटेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाएपछि बस खरिद अन्योलमा परेको हो । साझाले भने सरकारले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल बैंकमा जम्मा गरेको छ ।
सोबाट उसले वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज प्राप्त गर्नेछ । एकातिर विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको पैसाबाट बैंकमा ब्याज जम्मा भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितमा बैंकमा जम्मा भइरहेको सरकारी ढुकुटीको पैसा साझाले दुरुपयोग नगर्ने निर्देशक तुलाधरको दाबी छ । ‘सरकारले दिएको पैसा बैंकमा जम्मा भइरहेको छ । त्यसको ब्याज यातायात सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिनेछ । दुरुपयोग हुनेछैन,’ उनले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।